Maxakamadda cadaaladda Yurub oo soo saartay sharci dhibaato ku ah gabdhaha muslimiinta ah. - Somalia Focus
Maxakamadda cadaaladda Yurub oo soo saartay sharci dhibaato ku ah gabdhaha muslimiinta ah.
by Hassan Ali | Tuesday, Mar 14, 2017 | 112 views
14,March,2017(SofoNews) Maxkamadda ugu sarraysa ee wadamada ku bohoobay midowga Yurub, ayaa go’aan ku gaartay in milkiilayaasha shirkadaha ee wadamadaasi ay diidikaraan dumarka xijaaban gaar ahaan kuwa shaqaalohoodi kamid ah.
Waxaa sidoo kale xukunkaasi ay riday maxakamadda ugu sareysa Yurub uu reebayaa in isticmaalka ama xirashada wax kasta oo noqon kara calaamad siyaasadeed, mid falsafadeed ma mid diineed oo muuqata” waxaana ka mid ah xijaabka.
Laakiin sida ay sheegtay Maxkamadda Cadaaladda Yurub (ECJ), mamnuuciddan ayaa ay tahay in lagu saleeyo sharciyada u gaarka ah shirkadaha xeerarkoodu dhigayaan in shaqaaluhu xidhaan “lebis dhexdhexaad ah”.
Maxakamadda ayaa meesha ka saartay in aan lagu saleyn karin go’aanadaasi rabitaanka shaqaalaha ama macaamiisha.
Waa go’aankii u horreeyey ee maxkamaddu ka gaadho in lagu shaqo tegi karo xijaabka.
Xukunkan Maxkamadda Cadaaladda Yurub wuxu ka dhashay dacwad ay gudbisay haweeney shaqadeeda looga eryey in ay xidhnayd xijaabka oo u shaqayn jirtay shirkadda G4S ee dalka Belgium.
Maxkamadda sare ee Belgium ayaa dacwadan hore ugu gudbisay maxkamadda ugu sarraysa Yurub si ay talo sharci uga bixiso.
Soomaaliland oo mamnuucday in la qabto shir ka dhan ah heshiiskii dekeddaBerbera
Warbixin:Musharaxiintii Doorashada oo u Muuqda Caqabad hor taagan Dowladda Cusub